Translate Myanmar (Burmese) to Romanian | Multilang.space
translate Myanmar (Burmese) to Romanian, Myanmar (Burmese) to Romanian translations, Myanmar (Burmese) to Romanian Google Translate ,
မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား Salut ce mai faci
မည်သူမဆိုရှိပါသလား? Este cineva?
ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ Te iubesc foarte mult
ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ, Cât costă acest hamburger?
သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား? Îmi poți spune un taxi?
ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး imi pare rau
ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို sunt interesat
အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ Zborul meuafost întârziat
ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို Sunt aici pentru afaceri
မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည် Buna numele meu este
ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို Îmi pare rău, dar sunt căsătorită
ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ် As vrea sa te intreb
သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား? Poți să mă duci la aeroport?
ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ Care este momentul acum, te rog?
အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ? Unde este cea mai apropiată secţie de poliție?
ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား? Pot să îmi împrumut încărcătorul de telefon, vă rog?
ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား? Ma poti ajuta?
ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ? Dă-mi o băutură, te rog?
ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ? Cat costa?
ငါ gluten မှမတည့်ဘူး Sunt alergic la gluten
ဆရာဝန်ခေါ်ပါ Chemați un doctor
ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော Există un doctor?
ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား? Pot să primesc un telefon?
ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။ Sunați-mi pe șeful dvs., vă rog.
ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည် Acest loc este foarte frumos
ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ Duceți-mă la hotel, vă rog
အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ? Care este numărul camerei mele?